Waa maxay Joogtada noqoshada Farriinta Qoraalka? | Martech Zone
Waa maxay Joogtada noqoshada Farriinta Qoraalka?
Axad, Juun 17, 2018 Axad, Juun 17, 2018 Douglas Karr
Malaha malaha kanaal suuqgeyn toos ah oo furasho iyo jawaab celin kafiican farriinta qoraalka (SMS). Shirkad dayacda macaamiisheeda SMS waxay arki doontaa qoraalka naadigooda oo yaraaday iyo dakhliga oo ay weheliso. Geesta kale, ku duqeynta macaamiisha fariimo waxay u badan tahay inay ka careysiiso waxayna u badan tahay inay ka dhasho macaamiil fara badan
Faahfaahinta faahfaahinta faahfaahinta suuqgeynta ugu fiican ee SMS-ka waxayna siisaa aragti ku saabsan habdhaqanka macaamiisha, oo ay ku jiraan:
Sida ugu habboon ee loo cabiro qiimaha noloshiisa qof ka mid ah macaamiisha SMS.
Sida si sax ah loogu helo ogolaansho suuqa SMS ahaan liiska macaamiishaada.
Sida loo baaro waxa macaamiisha qoraalka ay rabaan iyo inta jeer ee ay rabaan.
Sida loo dejiyo jaangooyooyin muhiim ah oo si sax ah loo qiyaaso natiijooyinkaaga.
Suuqgele kasta oo rukhsad ku saleysan waa inuu isku dheelitiro inta jeer ee fariintooda, guud ahaan muggeeda, iyo dalabyo si loo hubiyo inay siinayaan qiimaha rajada. Haddii aad jeclaan lahayd xoogaa aragti ah oo ku saabsan dhisidda ololeyaal suuqgeyn ah oo suuqgeyn ah oo SMS ah, waxaan ku haynaa maqaal kale oo ku saabsan 6 waxyaabaha muhiimka ah ee suuqgeynta farriinta qoraalka.
Fariimaha SMS-ka, tan ayaa ka muhiimsan tan warbaahin kasta oo kale iyadoo la ogyahay in macmiilku siinayo ogolaansho inuu shakhsi ahaan ula soo xiriiro. Neon SMS, oo ah shirkad suuq geyn u leh suuq geynta qoraalka ee Ireland, ayaa soo saartay muuqaalkan - Sida Loo Helo Xaqiijinta Miisaanka Suuqa Suuq-geynta si aad u siiso tilmaamo, stats, iyo istaraatiijiyooyin loogu talagalay istiraatiijiyadda farriinta qoraalkaaga.